Iikhowudi zePosi API-UkuFikelela kwiDatha yeKhowudi yeHlabathi yeDilesi
Khangela iikhowudi zeposi, fumana zonke iikhowudi zeposi zomgama webanga kunye nokunye okuninzi ngekhowudi yethu yeposi API.
Idatha ebanzi yeHlabathi
Kulula ukuyisebenzisa i-API
Iiposikhowudi.app sisixhobo esikuvumela ukuba ufumane ulwazi ngeekhowudi ezahlukeneyo zeposi kwihlabathi liphela. Unokufumana iikhowudi zeposi kumgama omde ngeekhilomitha okanye iimayile, okanye ufumane iinkcukacha zekhowudi yeposi ngokubanzi.
GET Fumana iikhowudi zeposi kumgama
Ngale ndlela kulula ukuyisebenzisa yokuphela uyakufumana uluhlu lweekhowudi zePosi ezikumgama othile. Umzekelo wesicelo uza kubuyisa uluhlu lweekhowudi zeposi ezizodwa, uluhlu olupheleleyo lweekhowudi zeposi kunye neenkcukacha zekhowudi nganye yeposi.
I-API yethu yamkela imilinganiselo yomgama ngeekhilomitha (Okwendalo) okanye iimayile.
Ukutshintsha umlinganiso weekhilomitha kufuneka ubeke i- ms parameter kwisicelo sakho:
Impendulo iya kubonakala ngathi:
GET Fumana iinkcukacha zekhowudi yeposi
Umzekelo olandelayo uza kubuyisa iinkcukacha zeekhowudi zeposi ezihambelana nombuzo wokukhangela.
GET Fumana idatha yesiko
Uyakwazi kudlule params kratya ukufumana nje oko kukwaneleyo kwiziphumo, ukongeza nje ixabiso fields kwi isicelo sakho.
+94 Amazwe axhaswayo
CR (icosta Rica)
CZ (Umphakathi waseCzech)
DO (ilizwe lasedominic)
GB (Izikumkani Ezimanyene)
GG (Guernsey noAlderney)
IM (Umntu (Isle of))
KR (Korea yaseMzantsi)
LK (esri Lanka)
MH (Isiqithi saseMashal)
MP (Isiqithi saseMariyana eseMantla)